Handong Global University - Dzidza Kune mu South Korea
guta : Pohagn
inotangwa : 1995
Musakanganwa kuti kurukura Handong Global University
Kunyoresa pana Handong Global University
Handong Global University yave kunyora nhoroondo mutsva kubva pakuvambwa kwayo makore makumi maviri apfuura. zvakaratidzwa yedu kuratidza rudo kune vavakidzani vedu uye kushandura nyika maximizing vose vadzidzi 'uye mapurofesa' matarenda.
HGU ave oga zvakabetsera mberi Rokutenderwa dzidzo kuburikidza creatively vachishandisa yose yevanhu mari nokuda dzidzo RUBATSIRO RUNOTARISA kuti anovandudza zvose chimiro uye ruzivo.
Pamusoro pe, HGU yave vazvione. pamwe hweutungamiri yayo itsva yedzidzo kuti kufambira mberi muzana remakore rechi21 racho rekudzidza matambudziko ari kudyidzana munguva.
Kukwaniswa kunosimbiswa kwete dzidzo ruzivo-pakukurukura zvitaera kana dzidziso mumusoro nomusoro asi dzidzo anoshanda kuti kutungamirira vadzidzi kuti angapedze matambudziko.
HGU anobatsira vadzidzi kuvaka competencies zvavo kuburikidza chirongwa-kwakavakirwa kosi uye kubatsira zvakanaka-mwero matarenda kuti basa rinokosha muupenyu munyika. I kuratidza kuonga kwangu akanyanya kupisa kwamuri kwenyu mubereko uye rutsigiro HGU.
School of International Studies, Languages, uye Literature,
School of Management uye Economics,
School of Communication Arts uye Sciences,
Chikoro Counseling Psychology uye Social Welfare,
School Mukati Convergence Design,
School of Computer Sciences uye Electronic Engineering,
Chikoro Mechanical uye Control Engineering,
The yunivhesiti rakaumbwa December 1994. muvambi, Song Tae-Hun, aiva muridzi weimwe kambani svikiro kadikidiki, uye vakapa nyika uye mari kumisa payunivhesiti muKristu. Akakoka Dr. Kim Young-Gil kuva purezidhendi wokutanga. Dr. Kim aiva mutungamiriri wechiKristu, uye vaimboita aiita tsvakurudzo musayendisiti pa NASA uye uyewo purofesa Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).
The yunivhesiti akatarisana nematambudziko akawanda pakutanga. Kambani muvambi vakaenda kusauka apo President Kim akanga vanopinza vanapurofesa vokutanga uye vadzidzi. The yunivhesiti Akasanganawo kupikiswa vemo kubva Pohang vagari vaitarisira yunivhesiti kushumira zvikurukuru Pohang vagari. Kana zvikazikamwa kuti yunivhesiti yaizova yunivhesiti wechiKristu, vanopinza vadzidzi vose pamusoro Korea, Pohang vagari vakawanda vaishora pokugadzwa kuyunivhesiti. Izvi zvakaita kuti kumatare, uye muna imwe masutu izvi, President Kim akapomerwa kushandiswa dzinopiwa hurumende zvinangwa achigere pamutemo mvumo. Akanga mhosva uye akasunungura pashure pokupedza 56 mazuva ari mujeri.
Nokuda yokushomeka mari, yunivhesiti akasangana nematambudziko akawanda kusauka. President Kim uye mutevedzeri wapurezidhendi akashanyira kereke uye akasangana vaKristu vose muKorea uye kunze kukumbira mipiro. Mufundisi Onnuri Church (Seoul) akava sachigaro Handong University bhodhi, izvo zvakabatsira kuti pave noukama refu pakati maviri nemasangano. President Kim pachake zvakapa ake severance mari kubva KAIST. mapurofesa Vazhinji vaishanda pasina mubhadharo kwemwedzi yakawanda. Dzinoongororwa nokuda reBazi Redzidzo sezvo reformative mu dzidzo, Handong akahwina hurumende mabasa edzidzo, uye yunivhesiti akakwanisa mari ishande.[
With kombiyuta makosi uye vachiravana Chirungu, yunivhesiti akava akakurumbira pakati recruiters vemakambani makuru. mu 2007, Handong University akabatana University Twinning uye Networking (UNITWIN) program, chirongwa UNESCO. The yunivhesiti akasarudzwa ive "Advanced College Education (ACE)"Sangano pedyo Korean Ministry of Education mu 2010 uye 2011. Zvakanzi zvekare nominated somumwe 10 UNAI nomusimboti mumayunivhesiti mune 2010.
mu 2014, Dr. Jang Nokukurumidza-Heung yakanga yavakwazve sezvo 2nd purezidhendi Handong Global University. Pashure President Jang vaizvitora hofisi, Iye akazivisa zvinangwa zvitsva vanonyanya kuyunivhesiti, azviveza se "Gumi World-Changing Projects,"
Unoda kurukura Handong Global University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Handong Global University iri Map
Photos: Handong Global University pamutemo Facebook
Handong Global University wongororo
Join kukurukura pamusoro Handong Global University.